Niditra ny mpanjakavavy (Dan. 5:9-12)
Lesona 6: Mpanjaka iray fongana noho ny avonavona
Catégorie : Lesona 6: Mpanjaka iray fongana noho ny avonavona
Vakio izay voalaza momba ny mpanjakavavy ao amin'ny Dan. 5:9-12. Inona no nambaran'ny mpanjakavavy momba an'i Daniela? Nahoana no efa tokony ho fantatr'i Belsazara izany? Toa tsy nahalala na ny fisian'i Daniela akory aza anefa ny mpanjaka. Inona no ambaran'izany amintsika momba ny mpanjaka?
Samy very hevitra noho ny hafatra teo amin'ny rindrina ny olona rehetra nanatrika ny fanasana lehiben'ny mpanjaka. Rehefa izay dia niditra ny efitrano ny mpanjakavavy ka nanome torohevitra ho an'ilay mpanjaka very hevitra. Nampahatsiahy ny momba an'i Daniela tamin'ny mpanjaka izy, ka nilaza fa malaza noho ny fahaizany i Daniela. Afaka mamaha zava-miafina izy, no sady mahay milaza nofy koa, ary naneho ireo fahaizana ireo izy nandritra ny andron'ny mpanjaka Nebôkadnezara. Nampalahelo anefa fa tsy mba nahira-tsaina tahaka an'i Nebôkadnezara i Belsazara ka tsy mba nieritreritra ny hanontany ny hevitr'ilay soratra hafahafa tamin'i Daniela. Koa nilaina ny fanampian'ny mpanjakavavy an'i Belsazara, satria tsy fantany intsony izay tokony hatao manaraka. Nilaza ny mpanjakavavy fa i Daniela no hany olona tokana ao amin'ny fanjakana afaka mamaky ilay hafatra hafahafa teo amin'ny rindrina. Toa fanomezan-tsiny an'i Belsazara ny teniny, noho ny fanaovany tsinontsinona an'i Daniela. Rehefa izay dia mbola nilazalaza ny momba ny fahaizan'i Daniela tamin'i Belsazara koa ny mpanjakavavy: feno ny Fanahin'Andriamanitra i Daniela, no sady tena hendry; afaka milaza sy manazava nofy izy, no sady afaka mamaha zava-miafina; izy no lehiben'ny ombiasy sy ny mpisikidy sy ny Kaldeanina ary ny mpanandro tamin'ny andron'i Nebôkadnezara (Dan. 5:11,12).
Koa raha marina io filazalazana io, dia nahoana no tsy noraharahain'i Belsazara i Daniela? Tsy manome valinteny mazava amin'io fanontaniana io ny Baiboly. Azo heverina kosa fa rehefa avy nanompo ny mpanjaka, fara faharatsiny hatramin'ny taona fahatelo nanjakany i Daniela (Dan. 8:1, 27), dia tsy am-perinasa intsony. Mety ho antony iray ny taona. Ampoizina fa teo ho eo amin'ny valopolo taona i Daniela, ka mety tian'ny mpanjaka hosoloina olon-kendry tanora kokoa. Mety tsy noraharahainy koa i Daniela satria tsy te hanaraka ny Andriamanitr'i Daniela izy. Mety ho antony iray tiany hanoloana an'i Daniela koa izany. Na inona na inona anefa ny anton'izany tsy firaharahana izany, dia mahagaga ihany ny nanadinoan'ny mpanjaka ny momba an'i Daniela vetivety tahaka izany.
Vakio ny Rom. 1:16-32. Inona ireo fitsipika manan-danja hita ao amin'ireo andininy ireo? Ahoana no anehoana ireo fitsipika ireo, tsy eo amin'ny tantaran'i Belsazara fotsiny ihany, fa eo amin'ny tontolo manodidina antsika ankehitriny koa?